तीतोपाटी डट कम- वैदेशिक रोजगारीमा रहेको प्राय नेपालीहरु स्वदेशमै केहि गर्ने सोंच सवैमा हुन्छ विशेष गरी मध्यपूर्व र मलेसियामा कार्यरत नेपालीहरु र यो सोंच राख्ने नेपालीहरु मध्य धेरैले खेतीपाती गर्ने भनिरहेका हुन्छन् र नेपाललाई समृद्ध बनाउन सकिने खेती र उर्जा नै हो ।
खाडीका गैर आवसीय नेपालीहरुका लागि उर्जा या जलविद्युत् उत्पादनका लागि लगानी जुटाउनु एक प्रकारको हाउगुजी हो, जहाँ अवौं रुपैयाको कुरा हुन्छ । तर, सामुहिक रुपमा कृषी गर्नु सजिलो र सकिने खालको लगानी हो र वैदेशिक रोजगारी पछि आफ्नै मुलुकमा स्वरोजगारको सम्भावना बोकेको क्षेत्र पनि ।
मध्यपूर्वमा कार्यरत नेपालीहरु धेरैजसो आफ्नो कैयन विघा खेतबारी बाँझो या बन्धक राखेर वैदेशिक रोजगारीका गएकाहरु छन् । उनीहरुमा त्यो बाँझो खेतबारीलाई फेरी हराभरा बनाउने इच्छा शक्ति जाग्नु धेरै ठुलो कुरो हो यो बुझ्न विदेशमा कैयन रात अनिदो बसे होलान्, परिवार संगको विछोडमा कति छटपटाए होलान् त्यसको कुनै लेखा जोखा छैन । तर, यति हुंदाहुंदै पनि मध्यपूर्वमा कार्यरत अधिकांस व्यक्तिहरु आफ्रना छोरा छोरी फेरी विदेश नै आउन भन्ने चाहना राख्ने गर्छन् । धेरै संग कारण सोध्दा या त नेपालमा के गर्ने र ? या राम्रोसंग पढेन के गर्ने त ? भन्ने जवाफ सुन्ने गरिन्छ, यो निकै नै दुर्भाग्यपुर्ण हो ।
आज ठुलो जमात नेपालमा नै केही गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्छन । खाडीमा काम गर्ने नेपालीहरु तर केही गर्न सकिदैन भन्ने जमात पनि सानो छैन । यो दुबै अवस्थामा हामीले सोंचेका कामहरु गर्नका लागि पर्याप्त गृहकार्य नहुनु नै मुख्य कारण हो । छोराछोरीलाई पढाउनका साथै काम गरिखाने संस्कार दिन जरुरी छ । भविश्यमा केही गर्नै पर्छ भन्ने कुराको शिक्षा र वातावरण बनाउन जरुरी छ । पुरा नेपाल हाम्रो घर हो र हाम्रो आफ्नो घर हामी आफै बनाउन पर्छ अरु आएर बनाउदैन भन्ने कुरा पनि बुझ्न र बुझाउन जरुरी छ ।
मध्यपूर्वका नेपाली कामदारहरुको वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य शुखमय बनाउन सबैभन्दा पहिले बचत र लगानी गर्ने बानी बसाउन जरुरी छ । मानवीय मनोविज्ञान अनुसार हरेक व्यक्तिको आम्दानी संगै खर्च बढ्छ अर्को तिर आफन्छ बुबा दाई दिदी आदी विदेशमा भइन्जेल देखाइने आडम्बर पनि एक कारण हो खर्च बढाउन । फलस्वरुप विदेशमा अनेकन दुख सहेर कमाएको अर्थ रोजगारीको अन्न्य संगैै सकिन्छ ।
त्यसैले विदेश गएपछि पनि मितव्ययीता अपनाउदै अर्थ संकलन र बचत गर्ने योजना विदेश जानु भन्दा अघि देखि नै बनाउ पर्ने हुन्छ । नेपालमा भएका परिवारले समेत यसमा साथ दिनुपर्छ । अनि वर्षभरिको वचत रकम सके सम्म उचित लगानी गर्ने बानी पनि बसाल्न पर्छ । तर यो बचत र लगानीको बारेमा मध्यपूर्वमा कार्यरत नेपालीहरु कम नै जानाकार हुनु स्वभाविक हो ।
मध्यपूर्वका हरेक देश जहाँ नेपालीहरु कार्यरत छन् । त्यहाँ दर्जनौ संघ संस्थाहरु नेपालीहरुको हक हितका लागि भनेर खोलिएका छन्, जुन अत्यन्त सुखद पक्ष हो । यस्ता संस्थाले हरेक महिना विभन्न पीडीत नेपालीहरुलाई सहयोग गरीरहेका छन् । नेपालीहरु सकेसम्म र भ्याएसम्म अरुलाई सहयोग गर्छन भन्ने कुराको यो ज्वलन्त उदाहरण हो । एक साथ भएर समृद्ध नेपालको लागि धेरै गर्न सक्छन् भन्ने पनि हामी बुझ्न सक्छौं । तर, यस्ता संस्थाहरु वैदेशिक रोजगारीको कसरी सुखद अन्त्य गर्न सकिन्छ ।
समृद्ध परिवार, समाज र देश बनाउन कसरी योगदान गर्न सकिन्छ भन्ने बारे सचेतनामुलक कार्य गर्दै वैदेशिक रोजगारी पछि आफ्नै देशमा स्वरोजगार, व्यवसाय कसरी गर्ने भन्ने बारे सन्देश फैलाउन चुकेकै हुने । यसमा खाडीका गैरआवसीय नेपाली संघहरुले समेत ठुलो भुभिका खेल्न पर्छ ।
मध्यपूर्वबाट चुनिएका एनआरएनएका सचिवको संयोजकत्व रहेको Foreign Employment & Migrant Workers Welfare ले के र कस्ता कार्यहरु गर्ने गरेका छन् । शायद मध्यपूर्वमा कार्यरत दुइ प्रतिशत नेपालीलाई पनि थाह नहोला । यस कमिटीले हरेक देशमा रहेका नेपाली संघ संस्थाहरुसंग सम्मन्वय गर्दै foreign employment लाई कसरी सुखद अन्त्य गर्ने भन्ने बारेमा सकेसम्म धेरैलाई जानाकारी गराउन सक्नु पर्दछ ।
नकी वेवसाइटमा तीन करोड छ भन्नु र प्रेम बहादु राइ बचाउन सहयोग गर्न नसक्नु । खाडी देशमा रहेका नेपाली संघ संस्थाहरु व्याच लगाएर कुर्सीमा मात्र बस्नका लागि नबनोस्, यसमा हामी सबैको ध्यान जान जरुरी छ । चाहे त्यो कुनै क्षेत्रका नाममा स्थापना भएका हुन् वा जात या त फेरी गैरआवसीय नेपाली संघ नै किन नहोस् । यस्ता सवै संस्थाले विदेशमा रहँदा मात्र सहयागे गर्ने होइन्, विदेश वसाईलाई छोट्टाउन र स्वदेशमा गएपछि के गर्ने भन्ने योजना बनाउन समेत सहयोग गर्नपर्छ ।
मैले माथि कुरा गरेको थिए, कृषि सम्बन्धि योजनाका बारेमा । स्वदेश फर्केर गरिने यो पहिलो प्रयास हो । तर, आशातीत रुपमा धेरै कमले मात्र यसमा सफलता पाएका छन् । विदेश वसाई टुङ्गयाउनु भन्दा कम्तिमा दुइ वर्ष पहिले देखिनै आफ्नो योजना बनाइ सो सम्बन्धि अध्ययन गर्नु पर्ने हुन्छ । विशेष गरी कृषि गरी वस्तु उत्पादन त गर्न सकिएला तर बजार व्यवस्थापन त्यसको मुख्य पाटो हो । सफलताको लागि विशेष गरी हाम्रो जस्तो सिण्डीकेटले जकडिएको र छिमेकी देशबाट खान अयोग्य बस्तु भित्राइ बजारमा बेच्ने अनि फितलो अनुगमन भएकोले आफूले उत्पादन गरेको वस्तुको बजार कहाँ र कसरी बनाउने भन्ने पुर्व योजना हुनपर्छ ।
सवैभन्दा पहिले हामीले स्वदेशी उत्पादन प्रयोग र प्रर्वद्धन नगरे सम्म न त हाम्रो व्यावसाय न त सफल हुन सक्छ न त स्वदेशमा रोजगारी बढ्न सक्छ ।
ठूला उपभोग्य वस्तुमात्र होइन यसको शुरुवात त कृषि जन्य वस्तुहरुबाट गर्न जरुरी छ । तरकारी देखी लिएर चामल, गौ, पिठो, माछा, मासु स्वदेशी नै उत्पादन प्रयोग गर्ने बानी बसल्न अपरिहार्य छ । देशको करिब १८ प्रतिशत जनसंख्या वैदेशिक रोजगारीमा छौं । यो १८ प्रतिशत माथि करिब ५० देखि ६० प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष निर्भर छन् ।
अर्थात गैरआवसीय नेपालीहरुले ९विषेशतः खाडी र मलेसियामा कार्यरत० आजै देखि आ–आफ्नो घर परिवारलाई स्वदेशी वस्तु प्रयोग अनिवार्य रुपमा प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारी पछि नेपाल मै स्वरोजगारीको सृजना गर्न सरकारको मुख ताकीरहनु जरुरी हुने छैन । तपाई हामी काम गरीखान अयोग्य भन्दै विदेश छिरे जसरी हाम्रो सन्तान छिर्न पर्दैन, हाम्रो सन्तती बस्न योग्य देश हाम्रै अग्रसरताले बन्ने छ । किनकी, नेपाल हाम्रो घर हो डेरा होइन । आउँ संकल्प गरौं, नेपालमा भएको अष्ट ‘ज’ जल, जमिन, जंगल, जडिबुटी, जराजुरी, जलवायू जनसंख्या र जनशक्ति) को भरपूर उपयोग गर्ने छौं ।
स्वरोजगारबाट नै वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्ने छौं । अनि विदेशमा आर्जन गरेका अनुशासन, सीप र अर्थको सहि उपयोग गर्दै समृद्ध नेपाल बनाउन प्रत्येकले एउटा इट्टा थप्दै जानेछौं ।
वैदेशीक रोजगारीपछि सोंच्न सकिने अन्य विषयमा सूचना प्रविधिको क्षेत्र पनि एक हो । यसको क्षेत्र विशाल छ । त्यसमध्ये हामी सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट, क्लाउड सर्भिस, रिमोट डेस्क आदिमा ज्ञान हासिल गर्दै लगानी पनि जुटाउन सकिन्छ ।
समग्रमा वैदेशिक रोजगारीको सुरक्षित अवतरणका लागि कृषि, उर्जा र सूचना प्रविधीमा ज्ञान हासील गरी लगानी गर्ने सोंच बनाउन जरुरी देखिन्छ।
सुरज कुमार मस्के